Eo andalam-piovana amin’ny rafitra LMD ny Oniversiten’Antananarivo ka lasa antsoina hoe “Mention” no solon’ny Departemanta. Rehefa nisokatra nandritra ny 40 taona tokoa ny Departemantan’ny Paleontolojia sy ny Antropolojia Biolojika, dia nomarihina ny talata 15 desambra teo no fampahafantarana ho an’ny besinimaro ny nijoroany, izay notontosaina tao amin’ny Akademia Malagasy ao Tsimbazaza.
Andro iray natokana hanehoana ny voka-pikarohana eny anivon’ny Oniversite an’Antananarivo ity hetsika ity, ary hanomezana lanja ny fampiasana ny teny Malagasy eo amin’ny sehapampianarana. Nisokatra ho an’ny daholobe ny hetsika, ary niavaka noho ny tamin’ny volana jolay lasa teo izany, satria natao miendrika fifanakalozana sy fanehoan-kevitra.
Foto-kevitra telo no naranty tamin’ny fankalazana. Voalohany amin’izany ny siansa mifandraika amin’ny olombelona. Noresahina, ohatra, ny fitombon’ny zaza eto Madagasikara.
Ny faharoa moa dia ny vokatry ny fikarohana an’ireo tahirin-tany na « fossile » eny amin’ny faritra Boeny. Ary fahatelo manarak’izany ny fanehoan-kevitra momba ny laboratoara dimy izay misy eny amin’ny anjery manontolo, mahakasika ny vokatra azo sy ny àalana nolalovan’ny toeram-pikarohana tsirairay avy.
Ny tapany farany kosa dia nanarahana ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo zokiolona mpikaroka.
Nasaina manokana ho amin’izany fankalazana izany ny Profesora Jonah Ratsimbazafy izay novolavolain’ny DPAB rahateo. Hofaranana amin’ny zoma 18 desambra izao ny fankalazana, araka ny fanazavan’ny Dr Jean Freddy Ranaivoson, mpikarakara ny hetsika fankalazana ny faha-40 taonan’ny Departemanta.
Mialoha an’izay dia hisy hetsika hotanterahina ny Alakamisy 17 desambra eny amin’ny Centre Culturel Américain ao Tanjombato. Hisokatra amin’ny 5 ora hariva izany, ary ao indrindra no hanoloran’ny Ambasadaoro Amerikanina ny loka ho an’ny Profesora Jonah Ratsimbazafy, loka izay mitondra ny anarana hoe « Disney Award Conservation Hero ». Amin’io andro io ihany koa no hampahafantarana ny boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe « Vatsim-pikarohana ». Marihina fa hafatra ho an’ireo mpianatra maniry hanaraka ny diany izany.